Intsha Eyoyolo: Yintoni eyenza abathobekileyo bavuyiswe
Yintoni eyenza abantwana abanomdla bavuyise ngokwenene
I-angsty persona sele ibe yintetho yabaselula, kodwa uphando luye lwabonisa ukuba impilo yengqondo yabaselula iyisifundo esibalulekileyo namhlanje. NgokweSayithi yeZibonelelo zabazali, umyinge wama-5,000 abafundi base-US kumabakala 7-12 azama ukuthatha ubomi babo ngemihla. Isayithi siyaqhubeka sithi, "Abaselula nabaselula bafa ngokuzibulala kunomdlavuza, isifo senhliziyo, i-AIDS, iziphoso zokuzalwa, isifo, isifo sobhubhane, umkhuhlane, kunye nesifo esingapheliyo sesifo samaphaphu."
Kubaluleka kokuqinisekisa ukuba ulutsha luyavuya ngakumbi kunanini ngaphambili, ngakumbi njengoko sibona ukunyuka kwamazinga okuxhatshazwa, ukunyuka kwengcinezelo ebantwini ukuze kulungele izinto ezingenakwenzeka ngenxa yeefotohop kunye nezihlungi kunye nehlabathi elibonakala lixabisa ngakumbi igama kunye nokufaneleka kunokwaneliseka komntu kunye nomntu ngamnye. Nangona kunjalo, akusiyo yonke into elahlekileyo. Uphando lubonisa ukuba abantwana abaselula bayonwabile-kwiimeko ezifanelekileyo.
Nangona i-conception ethandwa ngumntwana osemncinci yintsholongwane enomdla ngokuqhubekayo kunye nabadala bakhe, umfanekiso onjalo unokuba yinkolelo engaphezulu. Njengoko kuchazwe kwi- Psychology Today, uphando lwabafundi abayi-2,700 abaphakathi kunye nabasesikolweni esiphakamileyo abaqhutywe yiSADD (Abafundi abachasene nezigqibo ezibhubhisayo) babonise ukuba ininzi yabaselula ithi bayonwabile yonke imihla. Ukongezelela, uphando lwe-SADD lubonise ukuba uninzi lwabaphenduli lubhengeze ukuba luba nolwalamano oluhle nabazali babo, kwaye ubudlelwane obuhle kwabazali kunye nabazali babo kuthetha ukuba ngokubanzi, abanako ukusela okanye ukusebenzisa iziyobisi.
Ngoko ke, nangona ubulumko obuqhelekileyo bubonisa ukuba intsha iphazamisayo kwaye ibonisa ukuziphatha okuyingozi njengokuba utywala kunye nokusetyenziswa kweziyobisi, intsha eninzi isenza ngendlela efanelekileyo, edibeneyo.
Ziziphi ezinye izinto ezikhuthaza ulutsha olonwabileyo, kwaye abazali bangabavusela njani abatsha abavayo?
Ukukhupha nokukhusela iMedia Media
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba neyure kwiimboniselo zentlalo ingabangela impembelelo yengxaki yomntwana osemantwaneni, ngoko ucinga ukuba yintoni usuku olupheleleyo lwezobambiswano zentlalo.
Oku akuthethi ukuthintela imithombo yoluntu ngokupheleleyo, kodwa kuthetha ukuthatha ingxoxo nomntwana wakho malunga nokuba ixesha elifuneka lichithwe kumajelo asekuhlaleni, kwaye ufuna iindlela zokufumana intsha ukuba ikhuphe ngokupheleleyo kwaye iphile ngexesha, i-IRL (ebomini bokwenene ). Nangona baqala ukuxhathisa, abantwana bakho abonwabileyo banokukubulela ngokuzayo.
Ukucinga ngezinto esizibulelayo
Ababanomdla abaselula bayabonwabile. Ngokomphando owenziwa nguGiacomo Bono, u-Ph.D., uprofesa eCyunivesithi State University, ukubulela kukuvuna inzuzo eninzi yengqondo yabaselula. I-20% yabanomdla abaseneminyaka engama-20 kwi-Dkt Bono yokufunda abantu abangama-700 babekho ngaphezulu kwe-15% kunokuba baxabise i-20% ukuba banentsingiselo ebomini babo kwaye babe no-15% ubuncipheko obuncinane bokuba neempawu ezixinzelelekileyo. Olu pho nonongo luphelile ukuba abazali kunye notitshala kufuneka bancede intsha ihlakulele ukubonga, oko kunokubangela izakhono ezibalulekileyo ezifana nentsebenziswano kunye nokunyamezela. Abaselula abakwazi ukuhlamba umbulelo baninzi bazive bebhetele ngokuphila kwabo, kwaye abantwana abanomdla banxulumene nabanye.
Phila ubomi obunempilo: Yidla ngokufanelekileyo nokuzivocavoca
Oku kufuneka kubonakale kungabikho-brainer kubaninzi bethu, kuba oku kubalulekile kubantu baluphi na ubudala, kodwa ukubanceda abatsha bafumane uvuyo lokuphila okunempilo luyisifundo esibalulekileyo kusenokwenzeka ebomini.
Njengoko kuthethwa kwiSayensi yemihla ngemihla, abafana abahlakulela imikhuba enempilo bahlala bevuya ngakumbi. Ngokwe-Understanding Society, isifundo seBhunga loPhando loLuntu nezoLuntu (ESRC) esakhangela abantu abangama-5 000 abaseUnited Kingdom phakathi kweminyaka eyi-10-15, abatsha abangazange bazame utywala baba ngamaxesha amane ukuya kwisithandathu kuxela amanqanaba aphakamileyo enonwabo kunabo bazama utywala. Abaselula abavuthayo babengaphantsi kwamahlanu ukuba bavuyiswe. Ukongezelela, ukusetyenziswa okuphezulu kweziqhamo kunye nemifuno kunye nokuthatha inxaxheba kwimidlalo kwakunxulumene namazinga aphezulu okonwaba. Ngako oko, ukukhulisa abantu abatsha abonwabileyo kuthetha ukugcina bephilile kwaye bekhuthele.
Ngokutsho kwesinye isifundo esichazwe kwi- US News, abatsha abathatha inxaxheba kwimodareyitha kwimisebenzi yokuzimela ngaphandle bavuya ngakumbi kunontanga yabo abachitha ixesha phambi kweekhompyutheni zekhompyutha kunye nevidiyo.
Nangona abaninzi abantu bebanomdla wokudlala imidlalo yevidiyo kunye nezikolo ezininzi zisebenzisa i- iPads kwiklasi, abazali abakhulisa abantwana kufuneka bathathe amanyathelo okunciphisa ixesha lokukhusela abantwana babo kwaye babenze ngaphandle. Abaselula abaselula bavame ukuchitha ixesha elininzi nabanye baze bachithe ixesha elingaphezulu ngaphandle koontanga lwabo oluthile olonwabileyo. Ngoko, qiniseka ukuba umntwana ujoyina iqela lezemidlalo, iqela okanye elinye iqela elimenza ukuba angene kwaye adibanise nolutsha olunexesha elifanayo kunye neminqweno efanayo.
Kubaluleka Kwolonwabo Ekukhuleni
Iintlobo zentsapho yolonwabo yolutsha zidlulayo kwiminyaka yeshumi elivisayo. Njengoko kunikwe ingxelo kumanqaku amanqaku amva nje, uphando, olufana nolunye oluqhutywe yiYunivesithi yaseLondon naseYunivesithi yaseWarwick ekhangele i-Survey of 10,000 abantu baseMelika, baye bafumanisa ukuba abatsha abonwabileyo bachaza imali ephezulu xa befikelela kwiminyaka engama-29. , abatsha abanomdla kakhulu bafumana i-30% ngaphezu koontanga lwabo olungonwabi, nokuba baqwalasele ezinye iinguqu ezinjenge-IQ kunye namanqanaba emfundo.
Nangona kungenakwenzeka ukuba ngokubakho ubunzima, ngamanye amaxesha kunokuba nzima, kunokuba nolwazi oluninzi lokuba lunokuba yinto yokudala, imfesane, nokuxhamla kubantu abadala kunye noontanga. Kwaye uphando lubonisa ukuba kubalulekile ukuba intsha ikwazi ukufumana ulonwabo ngokuphila kwabo kwixesha elizayo. Okuthakazelisayo, ingeniso ayinakuchukumisa kakhulu intsha yolonwabo. Nangona intlupheko ephezulu ingathintela ulonwabo lwabantwana, ulutsha alufuneki ukuba lucebile ukuba luvuyiswe. Iintsholongwane zivame ukubaluleka kwimisebenzi yoluntu eyongeziweyo eyongezelelekileyo ingenako ukuyifumana, kunokuba ixabise ingeniso eyongeziweyo ngenxa yodwa.
Intsha iyavuya xa ixhuma kwabanye, kungekhona xa kuthengwa iimpahla.
I-Vitamin C Ukunqunywa nge-Iodine Titration
Izikolo eziPhakamileyo zeDropout kunye neMfundo yesiCwangciso seZibini
Indlela Yakho Eyona Mandla Ukuhlaziya i-LibreOffice
Abadwebi be-CAD kunye neNkcazo yokuSebenza kweCandelo leMisebenzi
Inkqubo yoBugcisa yesiGaba seBakala lesi-10
Indlela abathakathi baseBrithani abalahla ngayo i-spell kwiHitler
Iimpawu zomthi apho kukhula khona
Iishedyuli zeTalk Rock Tour
Ngo-1999 I-Volkswagen Jetta Fuse Imephu
AbaPhambili abenzi beParood Period ezi-10 eziphezulu
I-Nursing kunye neZonyango zesiNgesi Isigama